Kirin 810 hadda waa rasmi!: Waxaan dhamaantiin idiin sheegeynaa 7nm SoC cusub oo ka socda Huawei | Androidsis
Kirin 810 waa rasmi!: Waxaan dhamaantiin idiin sheegeynaa Huawei's 7nm SoC cusub
Waxaan ka hadlaynay Kirin 810 Maalmahan ugu dambeeya. Waxaa la sheegay in Chipset-ka uu noqonayo kii labaad ee ay sameyso shirkadda iyadoo la adeegsanayo geedi socod 7nm ah, sidii ay ahayd Kirin 980, oo sidaasay noqotay. Intaa waxaa dheer, xog kale oo hore loo sii daayay ayaa ku raacsan waxa shirkadda Huawei maanta ku dhawaaqday ee ku saabsan processor-kan cusub ee loogu talagalay bartamaha.
Awoodda barnaamijkan moobiilku runtii waa wax lala yaabo. Kuwani waxay diiradda saaraan, in ka badan wax kasta, hawlaha la xiriira Sirdoonka Artifishalka. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Wax walba oo jira si looga ogaado Kirin 810
Kirin 810 hadda rasmi ah
Xubinta cusub ee kambiyuutarka processor-ka ee Huawei waxaa loo soo bandhigay qaab ahaan sidii ay caan ugu ahayd qaybta IA. Kani wuxuu ku qalabeysan yahay NPU cusub (Nucle Processing Unit, oo Isbaanish ah) oo la yiraahdo "Da Vinci", oo leh awood koronto oo aad u hooseysa kana awood badan Kirin 980, sida lagu muujiyay dhowr imtixaanadii ugu dambeeyay.
Chipset-ka wuxuu ka kooban yahay sideed koronto. Afar ka mid ah, oo diiradda saaraya waxtarka tamarta, waa Cortex-A55 waxayna ku shaqeeyaan saacad soo noqnoqota oo ah 1.88 GHz, halka rubuca kale uu ka kooban yahay dhuunta Cortex-A76 oo ah 2.27 GHz. Intaa waxaa dheer, sawirada, cayaaraha iyo qeybta multimedia, wuxuu isku darayaa Mali-G52, processor-ka cusub ee awooda badan ee awooda ku xira kumbuyuutarradan moobiilka ah isla markaana loo soo bandhigay inuu yahay cusboonaysiinta Mali-G51 GPU ee leh Kirin 710.
Waxa kale oo xusid mudan in, iyo sidoo kale Kirin 980, ah Snapdragon 855 iyo Apple's Bionic A12, soo saaray iyadoo la adeegsanayo qaabka TSMC 7nm. Tani waxay ka dhigaysaa processor-kii ugu horreeyay dhexdhexaad loogu talagalay taleefannada casriga ah ee adduunka in lagu dhiso nidaamkan.
Dhinaca kale, Huawei ayaa shaaca ka qaaday taas Awoodda farsamaynta muuqaalka ee Nidaamkan-ku-cusub ee Chip ayaa la siman kuwa kuwa ugu sarreeya ee SoCs lagu sheegay. Taa baddalkeeda, waxay ku dartay algorithm aragti habeennimo oo xoog badan oo ifaya iyo dulqaad badan oo sawir qaadista ah, waxayna ku dhawaaqday inay la timid Huawei HiAi 2.0, oo ujeedadeedu tahay hagaajinta waxqabadka teknolojiyadda sirdoonka farsamada, laga bilaabo gacanta NPU. Intaa waxaa sii dheer, si loo hagaajiyo khibrada ciyaaraha, soo saaruhu wuxuu sidoo kale ku daray taageerada habka Game +.
Ugu dambeyntii, cusub Huawei New 5 waa taleefankii ugu horeeyey ee casriga ah ee la yimaada Chipset-kan cusub, iyadoo la filayo in Mudane 9X Pro sidoo kale qalabee.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Kirin 810 waa rasmi!: Waxaan dhamaantiin idiin sheegeynaa Huawei's 7nm SoC cusub
Kaamirada Galaxy Note 10 waxay la imaan doontaa seddex qiime oo loo qaybiyey furitaanka